Entertainment – Online BBC
Wednesday, May 23admin@onlinebbc.news
May52018 by OnlineBBCNo Comments
“जब मेरा बुवाले मेरी आमासँग विवाह गर्ने विचार गर्नु भयो….!!!”
अहिले कन्नौज शहर पुग्ने यात्रुले कुनै बेला यो शहरको प्रमुख उद्योगका रुपमा रहेको अत्तर उत्पादन व्यवसायलाई सजिलै ठम्याउन पनि सक्दैन । तर मोटरकार, लरी र सडक व्यवसायीहरुको भीडमा यदाकदा फूलका टोकरीहरुले भरिभराउ गाडा पुरानो शहरको ठूलो ढोका भएर ढुंगा छापिएका गल्लीहरुमा जाने गर्छ । बीस वर्षअघि कन्नौजमा आसवन प्रक्रियाबाट अत्तर बनाउने ७०० वटा कारखानाहरु थिए। हाल १०० वटा जति मात्र बाँकी छन् । ती कारखानाहरुले गुलाफ, चमेली र मेहंदी जस्ता फूलको प्रयोग गरी आसवन प्रक्रियाबाट तेलमा आधारित अत्तर उत्पादन गर्ने गर्दथे । त्यस्ता अत्तरहरुको विशेषता भनेको तिनीहरुको बास्नाको गहनता नै हो र ती अत्तर तयार पार्न लाग्ने समय र सामाग्री पनि। एक किलो गुलाफको अत्तर बनाउन चार टन गुलाफको फूल आवश्यक पर्दछ । दमस्क प्रजातिको गुलाफको फूललाई तिनका काँडादार बोटबाट सूर्योदय हुनुअघि नै टिपेर त्यही दिन अत्तर कारखानाहरुम
पूर्व राष्ट्रपतिका चर्चित प्रेमपत्र
अमेरिका । पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामाले आफ्नी प्रेमिकालाई लेखेका पत्रहरु सार्वजनिक भएका छन्। ओबामाद्वारा लिखित पत्रहरुले जाति, वर्ग र आर्थिक असुरक्षासम्बन्धी भावनाहरु उजागर गरेका छन्। ओबामाले अलेक्जान्ड्रा म्याकनिअरलाई हस्तलिखित प्रेमपत्रहरु पठाएका थिए जसलाई उनले क्यालिफोर्नियामा अध्ययन गरिरहेका बेला भेटेका थिए। तीमध्ये केही पत्रहरुले भविष्यका राष्ट्रपतिले शुरुका दिनहरुमा गरेका संघर्षहरुको खुलासा गरेका छन्। सन् २०१४ मा इमरी विश्वविद्यालयको रोज पुस्तकालयले प्राप्त गरेका ओबामाका पत्रहरु अहिले आएर सार्वजनिक गरिएका हुन्। उक्त पुस्तकालयकी निर्देशक रोजम्यारी म्यागीले भनिन्, बडो सुन्दर तरिकाले ती प्रेमपत्रहरु लेखिएका छन् र एक युवाबाट गरिएको अर्थ र पहिचानको खोजीबारे पत्रहरुले उजागर गरेका छन्। आफ्नी श्रीमती मिशेललाई पहिलो पटक भेट्नुभन्दा ५ वर्षअघि ओबामाले सन् १९८२ र १९८४ को बीचमा ती प
युटुबमा द्रुतगतीमा अगाडी बढयाे गुन्द्रुक मिठो साग को तामा मिठाे बासकाे अाज मलाइ……….!!!
काठमाडौँ । लोकगोहोरी ईतीयासकै चर्चीत १ नम्बर बनेको गितकार केशब पौडेलको नँया गित पनि युटुबमा द्रुतगतीमा अगाडी बढेको छ । ६३ लाख बढीले युटुबमा हेरेको उखीखोलीको पानीका गितकार केशब पौडेलको आफ्नै युटुब बाट सार्बजनीक भएको गित गुन्द्रुक मिठो सागले छोटो समयमै युटुब मा १ लाख भ्यु नाघेको छ । नँया युटुब अकाउन्टबाट केही दिनमै १ लाख कट्नु नै उनको सफलताको पाटो भनेर संगितकर्मी हरुले प्रशंसा गरेका छन। जापान मा काम गर्दै आएका केशबले उही खोलीको पानी बाट सांगितीक यात्रा गरेसँगै चर्चै चर्चा को शिखरमा उनि पुगेका छन । अहिलेको गुन्द्रुक मिठो साग को गितमा केशबको शब्द ,शिब हमाल को लय र बिक्रम परिवार ,देबी घर्तीको श्वर रहेको छ भने,गितमा रामाजी खाँड र करिस्मा ढकालको अभिनय रहेको छ । काठमाडौँ । लोकगोहोरी ईतीयासकै चर्चीत १ नम्बर बनेको गितकार केशब पौडेलको नँया गित पनि युटुबमा द्रुतगतीमा अगाडी बढेको छ । ६३ लाख बढ
Apr92018 by OnlineBBCNo Comments
आखिर किन ज्योति मगरलाई गीत गाउन प्रतिबन्ध लाग्यो त ?
मनोरन्जन र कला प्रदर्शनका लागि सन्चालन भैरहने महोत्सवहरुमा पछिल्लो समय बिकृति फैलिदै गएको छ ।गायिका तथा मोडेल ज्योतिको मगरको उत्तेजक प्रस्तुतिले महिला हिंसाको घटनालाई प्रोत्साहन गरेको भन्दै गीत गाउन प्रतिबन्ध लगाइने भएको छ । सुनसरीको इटहरीको तालतलैयामा वैशाखको पहिलो साता हुन लागेको महोत्सवमा उनलाई प्रतिबन्ध लगाइएको हो । यस्ता अराजक र अस्लिल गतिबिधिहरुले सामाजिक बिकृतिलाई प्रोत्साहन गर्ने र महोत्सवहरुलाई उत्शृंखल बनाउने गरेका छन् ।सुनसरी सदरमुकाम इनरुवामा आयोजित हिंसा न्यूनीकरण विषयक कार्यक्रममा बोल्दै इटहरी उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर लक्ष्मी गौतमले उनीमाथी प्रतिबन्ध लगाइने बाताए । उच्छृङखल प्रस्तुतिले समाजमा विकृति निम्त्याउनुका साथै हिंसालाई प्रश्रय दिने भन्दै त्यस्तो कार्यका लागि इटहरी उपमहानगरपालिकाले कुनै पनि हालतमा इजाजत नदिने बताइन् । पछिल्लो समयमा देशभर सन्चालन भएका कतिपाए महो
Jan132018 by OnlineBBCNo Comments
प्रविधिको प्रयोग बढेसँगै पछिल्लो समय यु–ट्युबले मनोरञ्जनको गतिलो स्रोतका रूपमा परिचय बनाउँदै आएको छ। विभिन्न खालका सिर्जनात्मक भिडियो यु–ट्युबमा राखेर पैसा कमाउनेतर्फ पछिल्लो समय धेरैले सोच्न थालेका छन्। ८ नोभेम्बर १९९१ मा जन्मिएका डेनियल रोवर्ट मेडिलसन तीनैमध्ये एक हुन्। जसले यु–ट्युबमार्फत् पैसा कमाएर नै अर्बपति बन्न सफल भए। विश्वका धनीको सूचीमा अर्बपतिहरूको सूची सार्वजनिक गर्दै आएको पत्रिका फोब्र्सले मेडिलसनलाई अर्बपतिको सूचीमा समेटेको छ। १ करोड ७५ लाखभन्दा बढी सस्क्राइबर रहेको ‘डेन टीडीएम’ भचुअल गेमिङको सबैभन्दा ठूलो प्लेटफर्म हो। ट्युब भ्युअरर्सले डेनियललाई पनि सोही नाम दिएका छन्। अर्थात ‘द डाईमन माइनक्राफ्ट’ उनलाई उनका फ्यानले दिएको नाम हो। ‘द डाईमन मिडिलकार्ट’ र ‘माईनक्राफ्ट’ नामका अनलाइन गेम खेल्ने तरिका सिकाउन उनले उनले बढी भिडियो बनाएका छन्। बेलायती नागरिक डेनियलले उनले
बिदा मनाउन सस्तो प्याकेज
बिदाको समयमा परिवार, साथीभाइसँग घुम्ने योजनामा हुनुहुन्छ ? स्वदेश र विदेशका विभिन्न सहर घुम्ने रहर छ भने त्यसका लागि क्यान्डिड ट्राभल एन्ड टुर्स प्रालि र काष्ठमण्डप होलिडेजले सुलभ र सस्तो प्याकेज ल्याएका छन् । नेपाली समाजमा घुम्ने संस्कृतिको विकास भएसँगै पर्यटन प्रवद्र्धनमा टेवा पु¥याउन ती कम्पनीले स्वदेशका विभिन्न पर्यटकीय गन्तव्य र विदेशमा समेत प्याकेज तयार गरेका हुन् । नेपालभित्र घुम्न चाहनेलाई क्यान्डिड र विदेश घुम्न चाहनेले काष्ठमण्डपमार्फत सेवा दिँदै आएको बताउँछन् । ‘सुलभ मूल्यमा प्याकेज तयार गरेर बिक्री गरिरहेका छौं,’ क्यान्डिड ट्राभलका टिम मेनेजर भीम शाक्यले भने, ‘पर्यटकको चाहाना र आवश्यकता अनुसार सेवा प्रदान गर्छौं ।’ नेपालका रारा, मुस्ताङ, पोखरा, घान्द्रुक, घोरेपानी, चितवन, लुम्बिनी, धुलिखेल, नगरकोट लगायतका ठाउँलाई लक्षित गरेर प्योकज बनाइरहेको बताए । ‘घुम्न जानेको समय अन
धनी मानिस किन कञ्जुस हुन्छन् ?
क्लाउडिया हेमन्ड, बिबिसी फ्युचर खर्च गर्न भनेपछि अति कञ्जुस मान्छे तपाईंले आँखैअघिल्तिर देख्नु भएको हुन सक्छ । यही कञ्जुस्याइँका कारण उनीहरूले प्रशस्त पैसा र धन जम्मा गरेको धेरैलाई लाग्न सक्छ । तर प्रश्न के उठ्छ भने सबै धनी कञ्जुस किन हुन्छन् ? धनीहरूको बानी नै कञ्जुस हुनु हो ? कि पैसा कमाउन थालेपछि मान्छे कञ्जुस हुन थाल्छन् ? यो प्रश्नले तपाईंको मात्र होइन, संसारका अधिकांश मानिसको दिमाग खराब गरिदिएको छ । कतिसम्म भने विश्वविद्यालयका शोधकर्तासमेत यही प्रश्नमा रिंगिन थालेका छन् । र, यो प्रश्नको उत्तर खोज्न लागिपरेका छन् । सन् १९९३ मा अमेरिकाका केही छात्रहरूबीच एउटा प्रयोग गरियो । प्रयोग के थियो भने जो विद्यार्थी कलेज पढ्छ र बढी खर्च गर्छ, तीमध्ये को चाहिँ धनी हो ? अनि जे जवाफ पाइयो, त्यसले शोधकर्तालाई नै अचम्ममा पार्यो । कलेजमा अर्थशास्त्र पढिरहेकामध्ये अधिकांश विद्यार्थी ‘कञ्जुस’ देखिए
२०७४ को प्रतिक्षीत फिल्मको रुपमा हेरिएको ‘कान्छी’को शिर्ष गीत सार्वजनिक भएको छ । ‘चरी चट्ट परी’ बोलको गीतले युट्युबमा ७५ लाख बढी भ्यूु पाइसकेको अवस्थामा निर्माण पक्षले बिहीवार फिल्ममा समावेश ‘यो दिल दाऊमा लाउने’ बोलको गीत सार्वजनिक गरेको छ । चर्चित संगीतकार अर्जुन पोख्रेलको संगीत रहेको गीतमा दयाराम पाण्डेको शब्द र धर्मेन्द्र सेवानको स्वर सुन्न सकिन्छ । बसन्त श्रेष्ठको कोरियोग्राफीमा तयार भएको गीतको भिडियोमा नायिका श्वेता खड्का र नायक दयाहाङ राई फिचरिङ छन् । भिडियोमा यो जोडीको आकर्षक केमेष्ट्री देखिन्छ । यो गीत फिल्मको टर्निङ प्वाइन्ट हुनसक्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । गीतको भिडियोलाई लोकेशन, कोरियोग्राफी र खिचाइले उत्कृष्ट बनाएको छ । फागुन ४ गतेबाट प्रदर्शनमा आउन लागेको ‘कान्छी’लाई कोहिनूरु फेम निर्देशक आकाश अधिकारीले निर्देशन गरेका हुन् । मुस्ताङ, अप्पर मुस्ताङ, जोमसोम र राजधानी लगाय
Jan62018 by OnlineBBCNo Comments
जन्मदिनको अवसरमा होस् या अफिसमा पदको बढुवा होस्, विवाहको उत्सव मनाउन होस् या परीक्षामा पास भएको अवसरमा, रातिको बेला अलिअलि वा धेरै नै मात्रामा मध्यपान गर्नु प्रौढ मानिसहरूको स्वभाव नै हो। खाउन्जेल रमाइलो लाग्ने, सबै कुरामा मज्जा आउने यो रक्सीको मातले बिहानीपख भने साह्रै नै हैरान गराउँछ। वान्ता हुने, टाउको दुख्ने, खान मन नलाग्ने, चिन्ता लाग्ने, कुनै कुराको याद नहुनु अनि बेलुका पिएकोमा आफूलाई दोषी महशुस गर्नु ह्याङ्गओभरको मूख्य सङ्केत हो, तर यो कुरा भनिराख्नु जरुरी पनि छैन। hangover ल, अब यस्ता तनावमय ह्याङ्गओभरबाट कसरी मुक्त हुने बारे ११ उपायहरू हेर्नुहोस्। १. पानी पानी अनिवार्य पिउनुहोस्, राति मातेको बेला बाथरुम गइराख्नुभाको पक्कै याद होला! यसको मतलब तपाईँको शरीरमा पानीको मात्रा कम भइसकेको छ, त्यसैले सकेसम्म धेरै पानी खानुहोस् र पिसाबबाट फाल्ने कोसिस पनि गर्नुहोस्। अझै तातो कागती प
अब पालो ‘ठुला माछा’ र मुख्य अपराधीको : गृहमन्त्री
राजसंस्था र हिन्दराष्ट्र फर्काउन जनसंघर्ष गर्ने :राप्रपा
रित्तिँदै सदरमुकाम, भरिँदै गाउँ…!!!
बाह्य शक्तिको ‘डिजाइन’:घेराबन्दीमा ओली–प्रचण्ड !!!
भत्ता हटाइ कर्मचारीको तलब ‘स्केल’ बढाउने:अर्थमन्त्री
May 23, 2018 by OnlineBBC
३४ वर्षिय डी भिलियर्सले म बाहिरिने सही समय हो भन्दै लिए सन्यास…!!!
May 22, 2018 by OnlineBBC
सन्दीपको अष्ट्रेलियाको ‘बिग बास’ मा खेल्ने
चर्को गर्मीमा काम गरे फर्केकाहरुको वीर्य उत्पादन र शुक्रकीटको गुणस्तरमा ह्रास
‘झण्डै सन्दीप लामिछानेको करियर सकिएको’